Milatariga Syria oo howlagalo ka bilaabay deegaanada kulaala xadka Turkiga – SBC
Milatariga Syria oo howlagalo ka bilaabay deegaanada kulaala xadka Turkiga
Dimishiq:-Ciidanka Syria ayaa galay tuulada Naajiya ee ku taala xadka Turkiga xilli ay kadhacayaan magaalooyin dhowr ah cabashooyin ay wehliso aas loo sameenayo dadkii ku nafwaayey mudaaharaadkii dhacay jimcihii la soo dhaafay kuwaasi oo tiradoodu gaarayso 20 ruux.
Madaxa hay’ada xuquuqda aadanaha Syria Raami C/raxmaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ciidanka milatariga oo ay taageerayaan taangiyada ay galeen tuulada Naajiya ee u dhow xadka Turkiga, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kumaan kun oo ka soo cararay gumaadka ciidanka amaanka Syria deegaanka Jisru Shaquur ee galbeedka Syria.
Wakaaladda wararka rasmiga dalka Suuriya Saanaa ayaa ku warantay in ciidamada Syria ay isku faafiyeen tuulooynka kulaala Jisru Shaquur halkaasi oo ay galeen toddobaadkii la soo dhaafay si ay uga eryaan ururada hubaysan ee ku sugan deegaankaas.
Toddobaadkii la soo dhaafay Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeesay xukuumadda Dimishiq in ay sababeyso dhibaato dhanka bani’aadanimada ah waxa ayna ka dalbatay in ay joojiso holwgalada ciidanka ah ee lagu dhibatenayo shacabka, waxa ayna ugu baaqday in hay’adda laanqeyrta Cas ay u ogolaadaan in ay galaan goobaha ay dhibaatada ka jirto.
Aqalka Cad bayaan kasoo baxay oo ku wajahnaa dalka Suuriya ayaa lagu sheegay in aysan cudur daar laheyn falalka ay ku kacayaan ciidamada xukuumadda Suuriya iyo waliba is hortaagidda dhanka gargaarka ah.
Bayaanka kasoo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa yimid kadib markii qaxooti suuriyan ah oo gaaraya 4300 oo qof ay gaareen dalka Turkey-ga iyagoo u maray xadka ay wadaagaan.
Fransiiska, ingriiska, Jarmalka iyo Bortaqiiska ayaa maar kale ugu baaqay golaha ammaanka ee Q.M in ay soo saartogo’aan ka dhan ah xukuumadda Suuriya balse dalka Ruushka oo leh awooda diimada qayaxan ee Vito-ga ayaa cadeesay in ay ka hor imaaneyso tallaabo kasta oo ka dhan ah Suuriya